Semalt: वेब स्क्र्यापि Dat डाटाबेस। HTML Scraper र लाभहरू यसले व्यवसायहरूको लागि प्रदान गर्दछ
HTML स्क्र्यापर एक उपकरण हो जुन सजीलै HTML वेब पृष्ठहरू स्क्र्याप गर्दछ। हामीलाई थाहा छ कि ठूला वेबसाइटहरू बहुमत HTML प्रयोग गरेर लेखिएका हुन्। यसको मतलब यो हो कि हामीले हेर्न सक्ने प्रत्येक पृष्ठ संरचित कागजात हो। HTML स्क्र्यापर प्रयोग गरेर हामी विभिन्न वेब पृष्ठहरूबाट डाटा प्राप्त गर्न सक्दछौं र यसलाई पढ्नयोग्य र स्केलेबल ढाँचामा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ जस्तै CSV र JSON। यो उल्लेख गर्न सुरक्षित छ कि एचटिएमएल स्क्र्यापर नेटमा सबैभन्दा उपयोगी र अचम्मको वेब स्क्र्यापिंग र डेटा निकाल्ने उपकरण मध्ये एक हो। यसका मुख्य फाइदाहरू तल छलफल गरिएको छ।
१. हाम्रो समय बचाउँछ
एचटीएमएल स्क्रैपरको साथ, तपाईं सजिलै गतिशील वेबसाइटहरूबाट जानकारी निकाल्न सक्नुहुन्छ। HTML पृष्ठहरूसँग सम्झौता गर्न तपाईंलाई अरू कुनै उपकरणको आवश्यकता पर्दैन किनकि यो तपाईंको लागि पढ्नयोग्य र अर्थपूर्ण डाटा निकाल्नको लागि एक सबै-इन-वन प्रोग्राम हो। अन्य साधारण डाटा स्क्र्यापिंग अनुप्रयोगहरूको विपरीत, एचटीएमएल स्क्र्यापरले अधिक समय लिने छैन। यसको सट्टामा, यसले गतिशील र उन्नत वेब पृष्ठहरूबाट केही सेकेन्डमा जानकारी निकाल्नेछ। यसको विपरित, अन्य स्क्र्यापि services सेवाहरूले सात देखि दश दिन लिन सक्दछ र तपाईंको धेरै समय र ऊर्जा बर्बाद गर्दछ।
२. गति र संरक्षण
अधिकतर वेब स्क्र्यापिंग अनुप्रयोगहरू एपीआई कलहरू भन्दा ढिलो छन्, र केहि इन्टरनेटमा कुनै सुरक्षा प्रदान गर्दैन। ती डाटा निकासी सेवाहरूको विपरीत, एचटीएमएल स्क्रैपरले उच्च कार्यमा आफ्ना कार्यहरू गर्दछ र २० - 30० मिनेटमा दश हजार वेब पृष्ठहरूसम्म प्रक्रिया गर्न सक्छ। यसका साथै, यो उपकरणले तपाईंको पूर्ण सुरक्षा र गोपनीयता सुनिश्चित गर्दछ। यसको मतलव तपाईले तपाईको स्क्र्याप गरिएको डेटाको सुरक्षाको बारेमा चिन्ता लिनु पर्दैन किनकि यो तेस्रो पार्टी प्रयोगकर्ताहरूसँग कहिले पनि सेयर हुँदैन।
Great. महान रखरखाव र शुद्धता
एचटीएमएल स्क्रैपर ती मध्ये एक डाटा स्क्र्यापिंग उपकरणहरू हुन् जसले उत्तम मर्मत र शुद्धता सुनिश्चित गर्छन्। यसको मतलब निकालिएको डाटा त्रुटिमुक्त छ र यसले भ्रमित शब्दहरू समावेश गर्दैन। धन्यबाद, यस वेब स्क्र्यापि technology टेक्नोलोजीको मर्मतको आवश्यकता पर्दैन र गुणस्तर परिणामहरू सुनिश्चित गर्दछ।
You. तपाइँ प्रतिस्पर्धा मा रहन मद्दत गर्दछ
यस डाटा-चालित विश्वमा हामी सतर्क हुनु आवश्यक छ किनकि नेटमा प्रस्तुत गरिएको जानकारीले प्रत्येक एक सेकेन्ड परिवर्तन गरिरहन्छ। यदि हामी सहि डाटा प्राप्त गर्न चाहन्छौं भने हामीले एचटीएमएल स्क्रैपर प्रयोग गर्नुपर्नेछ। वास्तवमा यो उपकरणले स्टार्टअपलाई उनीहरूको प्रतिस्पर्धी भन्दा एक कदम अगाडी हुन मद्दत गर्दछ। HTML स्क्रेपरको साथ, तपाईं संकलन गर्न, व्यवस्थित गर्न, स्क्र्याप गर्न र केही मिनेटको मामलामा उच्च-गुणवत्ताको जानकारी निर्यात गर्न सक्नुहुनेछ। साथै, यो डाटा स्क्र्यापिंग सेवाले हामीलाई हालको बजार प्रवृत्तिमा नजर राख्न मद्दत पुर्‍याउँछ र हाम्रा प्रतिस्पर्धाहरूको वेब पृष्ठहरूको बारेमा जानकारी प्रदान गर्दछ। यसले गुणवत्तामा सम्झौता नगरी अर्थपूर्ण र पढ्न योग्य डाटा निकाल्न सक्दछ। यसैले, एचटीएमएल स्क्रैपर संसारभरिका स organizations्गठन र उद्यमहरूको प्राथमिक छनौट हो।
Broken. टुटेका यूआरएलको साथ डिलहरु
कहिलेकाँही हामी टूटेका यूआरएलहरू भेट्छौं र अझै उनीहरूको जानकारी निकाल्न चाहन्छौं। HTML स्क्रेपरको साथ, टुटेको वेब लि web्कहरू, अनलाइन पुस्तकालयहरू, र XHMTL टुक्राबाट कसैलाई पनि डेटा निकाल्नको लागि सजीलो हुन्छ। यससँग भिन्न विस्तारहरू छन् जस्तै लोफा र सेनिटाइज र टुक्रिएको लिंक तुरून्त सफा गर्न मद्दत गर्दछ। यस स्क्र्यापले दुबै एचटीएमएल र एक्सएमएल फाइलहरूबाट डाटा तान्न सक्छ र छोटो समयमा सही डाटा प्रदान गर्दछ।